Remittance - Myanmar Citizens Bank (MCB)
Internal Branch Transfer အကြောင်း
Money transfer person to person
MCB ဘဏ်ခွဲအချင်းချင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သော ပြည်တွင်းငွေလွှဲခြင်း ဆိုင်ရာ များအား ဆောင်ရွက်ပေးသော ငွေလွှဲ လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးပို့သူနှင့် ငွေလက်ခံရရှိသူ၏ အမည် ၊နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊နေရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ငွေလွှဲပေးသွင်းမည့်စာရင်းအမှတ် တို့အားပြည့်စုံစွာရေးသားဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
MCB ဘဏ်အချင်းချင်း ငွေလွဲခ နှုန်းထားများအား ကျပ် (၁၀၀)လျှင် (၅)ပြားနှုန်းဖြင့် ဆောက်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သော ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လိပ်စာများအား အောက်ပါလင့်သို့ နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည်ရှုနိုင်ပါသည်။
MCB Branches Location List
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မိတ်ဖက်ဘဏ်ခွဲများရှိရာ မြို့နယ်တိုင်းရှိ ဘဏ်ခွဲများသို့ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သော ငွေလွှဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
MCB ဘဏ်မှ မိတ်ဖက်ဘဏ်ခွဲများသို့ အနည်းဆုံးငွေလွဲခ နှုန်းထား (၁၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဆောက်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
CB (သမဝါယမ ဘဏ်)
MWD (မြဝတီ ဘဏ်)
MOB (မြန်မာ အရှေ့တိုင်းဘဏ်)
SMIDB (အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှု့ လက်မှု့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)
CHID (ဆောက်လုပ်ရေး၊အိမ်ရာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)
SHWE (ရွှေ ကျေးလက်နှင့် မြိူ့ပြ ဖွံဖြိုးတိုးတတ်ရေးဘဏ်)
AYB (အာရှ ရန်ကုန်ဘဏ်)
Bank Account ဖွင့်ထားစရာမလိုပဲ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သော ငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ငွေလွှဲပေးပို့မည့် နေရာဒေသ ဘဏ်ခွဲလိပ်စာအားဖော်ပြပေးယုံဖြင့် ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ငွေပေးပို့သူနှင့် ငွေလက်ခံရရှိသူ၏ အမည် ၊နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊နေရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ် တို့အားပြည့်စုံစွာရေးသားဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
အနည်းဆုံးငွေလွဲခ နှုန်းထား (၁၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဆောက်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
IBFT ဆိုသည်မှာ မတူညီသော ဘဏ်အချင်းချင်း MCB MPU Card (သို့မဟုတ်) MPU JCB Co-brand Card ရှိရုံဖြင့် ATM စက်ကိုအသုံးပြု၍ မတူညီသော အောက်ဖော်ပြပါဘဏ်များ၏ MPU Card Account (သို့မဟုတ်) Bank Account ထဲသို့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်များအချင်းချင်း IBFT ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို ATM မှတစ်ဆင့် အသုံးပြု နိုင်ပါ သည်။
YOMA BANK (ရိုးမဘဏ်)
UAB BANK (ယူနိုက်တက်အမရဘဏ်)
Fee Description (MMK)
Commission Fees 0.05% per transaction amount
Flat Fees 200MMK
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကို မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် RIA IME (International Money Express) နှင့် နေရာပေါင်း (၆၉) နေရာမှ ကိုယ်စလှယ်ပေါင်း (၁၀၀) ဖြင့် RIA IME မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား များဘဏ်သို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အခြားသောငွေလွှဲလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Transfer To, Merchantrade တို့ဖြင့်လည်း ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘာအနှံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Transfer To Mobile Financial Service, International F.C. Stone, City express, Japan နိုင်ငံအ‌ခြေစိုက် Queen Bee Capital, Korea နိုင်ငံအ‌ခြေစိုက် Hanpass ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများနှင့်လည်း အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များရှိကာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း များကို ယခင်ကထက် ပိုမိုဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
What are the requirement for remittance?
“ It needs to provide name, ID number, Transfer account number, address and
phone-number of both sender and receiver as complete.”
How much is the service charges of remittance?
“ Service charges may vary according to the type of remittance made.
We provide low remittance transfer charges as 150 Kyats.”